Iphinikhodi ye-Lapel, indondo yezemidlalo, i-Metal Keychain - i-Kingtai
I-Kingtai ingumkhiqizi wemisebenzi yensimbi ohlonishwa kakhulu owaziwayo. Futhi uyilungu likaSean Hannity Lapel pin Community. Ngokuzibophezela kwayo okungantengantengi kukhwalithi ephezulu kanye nobuciko, kanye nenkonzo yamakhasimende ehlukile. Okubambe iminyaka engaphezu kwengu-20 nakho kokukhiqizwa kwemisebenzi yezandla ehlukahlukene. I-Kingtai ineqembu elihle kakhulu lokuklama kanye neqembu lebhizinisi. Kusukela yaqalwa, amalayisense namalungelo obunikazi esiwatholile angaphezu kuka-30 izingcezu, ezimbalwa zazo okuyi-Disney, Wal-Mart, Haryy Potter, Universal Studio, SGS, FDA, ne-ISO9001.
Sinikeza amakhasimende ethu izinto zekhwalithi ephezulu ngamanani aphansi kakhulu, esikwazi ukukwenza ngenxa yezinga lomnotho esilitholayo ngokukhiqiza ngobuningi nokusebenza kahle kakhulu. Sigcina irekhodi elingenakunqotshwa lokulethwa ngesikhathi, futhi siyaqonda izinsuku zokugcina zamakhasimende. Sihlale sinentshisekelo ekwakheni ubudlelwano besikhathi eside namakhasimende ethu, futhi ngokuvamile sithola afanayo ebuyela njalo ukuze afake ama-oda esikhathi esizayo. Mayelana nobudlelwano bebhizinisi nebhizinisi.Sivulelekile kubambiswano noma ukuba yingxenye ebalulekile yochungechunge lwakho lokuhlinzeka, ngakho zizwe ukhululekile ukusithinta mayelana .
UBUCHULE LWETHU: Abakhiqizi bezindondo basekela Indondo nebhokisi lokupakisha ekwakhiweni kwakho. Thina...
Ingabe ufuna ukuthenga ama-Keychains angokwezifiso? Sinokukhetha okuvelele, ukhiye wethu owenziwe ngezifiso ...
Ukusetshenziswa Okungcono Kakhulu Iphinikhodi ye-lapel ye-2D iguquguquka kakhulu futhi ingasetshenziswa ngezikhathi ezahlukahlukene! Sebenzisa i...
UBUCHULE BETHU: Abakhiqizi be-PVC basekela i-PVC keychain kanye nebhokisi lokupakisha ekwakhiweni kwakho....
Ukwenza ngokwezifiso ukukhiqiza, ukuqinisekiswa kwekhwalithi, insizakalo yobuqotho Ububanzi bokusebenza: Ibhizinisi...
UBUCHULE LWETHU: Abakhiqizi bezindondo basekelwe esithombeni esibaziwe se-3D nebhokisi lokupakisha ekwakhiweni kwakho...
Izivuli zamabhodlela zethu eziwusizo zenza iphathi enhle nezipho zokukhangisa. Ibhodlela lasekhaya livuliwe...
Njengoba sinesipiliyoni seminyaka engaphezu kwe-10 ekukhiqizeni ubuciko bensimbi kanye nemikhiqizo yezandla, sinesevisi ephelele yokuma okukodwa, kusukela ekuklanyeni kuya emikhiqizweni ephelile, ukuze uqiniseke.
Ihlala ibeka ikhwalithi kuqala futhi iqondise ngokuqinile ikhwalithi yomkhiqizo yayo yonke inqubo.
Kusukela yaqalwa, Amalayisense namalungelo obunikazi Esiwatholile angaphezu kuka-30, eziningana zazo okuyi-Disney, Wal-Mart, Harry potter, Universal Studio, SGS, FDA kanye ne-ISO9001.
Inkampani ye-Kingtai craft product limited, ebambe iminyaka engaphezu kwengu-20 isipiliyoni sokukhiqiza imisebenzi yezandla ehlukahlukene, ukuhlanganiswa kwayo ngokuphelele kwenkampani yemboni neyohwebo, ngakho-ke sineqembu lokuklama elivuthiwe neqembu lebhizinisi.
Ubuciko kanye nenqubo yokwenza amabheji
Umhleli we-Kingtai uthole ukuthi kusenabantu abaningi abangakacaci kahle ngezinyathelo zokwenza ibheji ngokwezifiso. Namuhla ngizokwabelana nawe ngesihloko mayelana nokwenza ibheji ngokwezifiso. Lesi isihloko sesinyathelo ngesinyathelo, ngethemba lokusiza abangani abanemibuzo. Izinyathelo zokukhiqiza ibheji ma...
I-130th Canton Fair izoba ku-inthanethi futhi ingaxhunyiwe ku-inthanethi ngomhla ka-15-19 Oct.
Inkampani yethu izobamba iqhaza embukisweni we-inthanethi futhi ungaxhunyiwe ku-inthanethi. Inombolo yethu yedokodo eku-inthanethi ithi GI03 Inombolo yethu yedokodo engaxhunyiwe ku-inthanethi ithi 10.3E46 ...
MAYELANA NATHI NGENEWEKHI YOKUDAYISA XHUMANA NATHI IMISEBENZI
I-KingTai yanamuhla isebenza ngenjongo yesevisi yekhasimende lokuqala , futhi ibambe iqhaza kumbukiso waseCanton Fair naseHong Kong iminyaka eminingi. Sihlinzeka ngesevisi eqotho kumakhasimende, futhi siqhubeka sisungula izinto ezintsha ngokholo lwendalo yempilo enhle